“Xaalada uu Ramsey kaga sugan yahay Arsenal, wax saameyn ah kuma yeelan doonto booskiisa xulka qaranka Weles” _ Giggs – Gool FM
“Xaalada uu Ramsey kaga sugan yahay Arsenal, wax saameyn ah kuma yeelan doonto booskiisa xulka qaranka Weles” _ Giggs
(England) 11 Okt 2018. Halyayga kooxda Manchester United ee Ryan Giggs ayaa xaqiijiyay in xaalada uu Aaron Ramsey kaga sugan yahay kooxda Arsenal aysan wax saameyn ah kaga yeelan doonin xulkiisa qaranka Weles.
Waxaa jira warar badan ee ku saabsan mustaqbalka 27 jirkaan reer Weles, kaasoo haatan ku jira sanadka ugu dambeeya ee heshiisk uu haatan ku joogo kooxda reer London ee Gunners, wuxuuna suuqa xagaaga ee soo aadan si xur ah ugu biiri doonaa kooxda uu doonayo.
Aaron Ramsey ayaa ka qeyb galay dhamaan 8 kulan ee horyaalka Premier League ay xili ciyaareedkan ka ciyaartay kooxda Arsenal, isagoo dhaliyay gool cajiib ah kulankii ay 5-1 kaga badiyeen Fulham.
Hadaba macalinka xulka qaranka Weles ee Ryan Giggs ayaa kaga jawaab celiyay kadib markii wax laga weydiiyay saameynta ay ku yeelan karto Ramsey xaalada uu kaga sugan yahay kooxda reer London.
“Ma doonayo inaan ka hadlo mana filayo in wax saameyn ah ay ku yeelan doonto”.
“Ma ahan xili ciyaareedkii hore, mana ahan xili ciyaareedkan, Aaron Ramsey wuxuu ku raaxeesanayaa kulamada saaxiibadiis ee xulka qaranka Weles, arinta ku aadan heshiis kordhintiisa ma doonayo inaan ka hadlo”.
Xherdan Shaqiri oo ka warbixiyay sida uu yahay xiriirka kala dhexeeya tababare Jürgen Klopp
“Arturo Vidal ma uusan ixtiraamin saaxiibadiisa.”.